Waraaqo | Heeshi
Tirakoobidda xubnaha maansada Soomaaliyeed
Arbaca, Juunyo 10, 2015 ·	by Idiris M. Cali ·	in Waraaqo	· Faallo u dhaaf
ARAR: Waraaqdani waxa ay soo bandhigaysaa hab ku salaysan xisaabta racaynta oo lagu tirakoobi karo xubnaha maansada. Habkani waxa uu aragti ahaan caddaynayaa in tirada xubnaha maansadu tahay, ugu yaraan, 7735—taas oo ay xubin waliba leedahay qaabdhismeed u goonni ah, oo ay kaga soocan tahay xubnaha kale. Waxa kale oo ay waraaqdu soo taxaysaa tusaalayaasha iyo […]
Magacyada tiraallada waaweyn
Sabti, Juunyo 2, 2012 ·	by Idiris M. Cali ·	in Waraaqo	· 4 Faallo
FG: Waraaqdan oo sannado ka hor soo baxday waxaan ku biiriyey warcelis kooban oo aan kaga hadlayo adeegsashada ereyga “lag.” ARAR Af Soomaaligu ma laha erey u dhigma “million,” bal se ereygan Laatiinka ah oo uu dhawaqiisu af Carabi yahay ayey Soomaalidu adeegsataa, waxa ay na dhahdaa “malyuun” amma “milyuun.” Waraaqdani waxa ay soo bandhigaysaa […]
Jimce, Oktoobar 21, 2011 ·	by Idiris M. Cali ·	in Waraaqo	· Faallo u dhaaf
FG: Waraaqdan oo sannado ka hor ku soo baxday kobgalshaha WardheerNews ayaan hufid ku sameeyay. Daabacaaddii koobaad halkan kala soco. AFEEF: Bashiirow guntaa laga fantaa, geed haddaad koriye[i] — (Gantaal, 115; Max’d-Daahir Xasan). Waa sida meeriskaasu yeedhshay hannaanka ay warqaddani u qorantahay. Xogta ay xambaarsantahayna waa ay ka gungaadhaysaa. Sida kale, maansadeennu waa bade, yaan […]